मनोमानी शुल्क लिने कलेजमाथि छानबिन | Educationpati.com
२०७४ माघ ११ गते १२:२५मा प्रकाशित
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको पाइएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिन गर्ने भएको छ। त्रिविले अनुगमन निर्देशनालयका प्रमुख विश्व खनालको नेतृत्वमा छानबिन एवं अनुगमन टोली गठन गरेको छ ।
योग्यता (मेरिट) सूचीका एमबीबीएस विद्यार्थीले त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छानबिन माग गरेका थिए। निजी मेडिकल कलेजहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको हो। उपकुलपति डा. खनियाँले भने, ‘सरकारले तोकेभन्दा विद्यार्थीसँग निजी मेडिकल कलेजहरूले अनियमित ढंगमा अतिरिक्त शुल्क मागेको पाइयो। स्थलगत अनुगमनमा खटिन निर्देशन दिइसकेको छु।'
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट सम्बन्धनप्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी शुल्क असुलेको आरोप लगाउँदै एमबीबीएसमा भर्ना हुने विद्यार्थीले मंगलबार डिन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उपत्यकाका मेडिकल कलेजहरूले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरकाले ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारले तोकेको शुल्कका अतिरिक्त ५ देखि १० लाख रुपैयाँ मागेको दाबी विद्यार्थीको छ।
अतिरिक्त रकम मागेका कलेजविरुद्ध प्रमाण संकलन गरी कानूनी कारबाहीसमेत गरिने डा.खनियाँले दाबी गरे। छानबिन टोलीले पीडित विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरी अतिरिक्त रकम तिरेको बिल, भौचरलगायत प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। उनले भने, ‘तोकिएको शुल्कभन्दा एक पैसा बढी तिर्नु पर्दैन। विद्यार्थीले पनि डराएर अतिरिक्त रकम नबुझाउन अनुरोध गरेका छौं।' महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति डा. मिलन गैह्रेले छानबिनमा मनोमानी शुल्क लिइएको पाएर पनि कारबाही नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।
दिनेश गौतमले नागरिकमा लेखेको खबर